မဒေါင်းလုပ် KeyLock မအဘို့ Windows
မအခမဲ့ မဒေါင်းလုပ် မအဘို့ Windows (4.30 MB)
KeyLock သည် ကွန်ပျူတာလော့ခ်ချခြင်းပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ကွန်ပြူတာကို အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် မမျှဝေချင်သောသူများ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည့် ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပရိုဂရမ်ကြောင့်၊ သင်သည် USB flash memory ၏အကူအညီဖြင့် သင့်ကွန်ပြူတာကို လော့ခ်ချနိုင်ပြီး မတူညီသောလူများကို သင့်ကွန်ပြူတာသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။
အလွန်လုံခြုံသောပရိုဂရမ်ဖြစ်သည့် KeyLock သည် သင့်အား အလုပ်မန်နေဂျာအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာလော့ခ်ချပြီးနောက် အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ တားဆီးပေးသည်။ သော့ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အရာအားလုံးက မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ သင့်ကွန်ပြူတာကို လော့ခ်ဖွင့်ရန်၊ သင်၏ USB flash drive ကို သင့်ကွန်ပြူတာထဲသို့ ရိုးရှင်းစွာ ထည့်သွင်းပါ။ Windows ၏ စံဆက်တင်များတွင် တွေ့ရသော စကားဝှက် သော့ခတ်ခြင်း အင်္ဂါရပ်ထက် လက်တွေ့ကျပြီး ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော စနစ်ကြောင့်၊ သင်သည် သင့်ကွန်ပျူတာကို စွန့်ခွာရန် စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါ။
စွမ်းအင်ချွေတာသည့်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသော အဆိုပါပရိုဂရမ်သည် အထူးသဖြင့် လက်ပ်တော့အသုံးပြုသူများကို ဘက်ထရီအားကုန်သက်သာစေသည်။ ထို့ကြောင့် အပိုပရိုဂရမ်တစ်ခုအတွက် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု များများစားစားမရှိပါ။
လော့ခ်ချမျက်နှာပြင်အတွက် မတူညီသော desktop မြင်ကွင်းကို သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသည့် ပရိုဂရမ်သည် သင့်ကွန်ပြူတာကို လော့ခ်ဖွင့်ရန် ကြိုးစားနိုင်သည်ဟု သင်ထင်နေသူများကို အံ့ဩစရာလေးများ ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင့်ကွန်ပြူတာကို မကြာခဏ ထွက်သွားပြီး အခြားလူများ သင့်ကွန်ပျူတာသို့ မရောက်ရှိစေလိုပါက၊ သင်သည် KeyLock ပရိုဂရမ်ကို ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မဖိုင်အရွယ်အစား: 4.30 MB
CPUCores :: Maximize Your FPS isagame acceleration program that can solve your game acceleration...
EaseUS System GoBack Free သည်သင်၏ Windows...
CPUBalance သည်သေးငယ်။ ထိရောက်သောဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။...
IObit SysInfo သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသုံးစွဲရလွယ်ကူသည့်စနစ်သတင်းအချက်အလက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။...
Wise Care 365 ပရိုဂရမ်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ၏ registry settings, disk နှင့်အခြား system tools...
CPU-Z သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပရိုဆက်ဆာ၊ Motherboard...
PC Health Check သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသည် Windows 11 ISO ကိုဒေါင်းလုပ်မချမီ Windows 11...
WhyNotWin11 သည်သေးငယ်ပြီးရိုးရှင်းသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ကွန်ပျူတာသည် Windows 11...
Registry Reviver ဆိုတာ Windows registry ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးအမှားအယွင်းတွေကိုပြုပြင်နိုင်တဲ့...
စုစုပေါင်း PC Cleaner...